मुटु र प्रेमको सम्बन्ध छ : डा. ओम मूर्ति अनिल – Health Post Nepal
२०७७ फागुन २ गते १६:३५
प्रेम जीवनको एक अभिन्न अंग हो। मानिसमा प्रेम हुन्थेन भने यति खुशी पनि हुन्थेन। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा प्रेम मानवका लागि खुशीको कारक हो।
आज ‘भ्यालेन टाइन डे’ अर्थात प्रेम दिवस्। यो प्रेम गर्नेहरूका लागि एक उत्सवको दिन हो। आजका दिन विभिन्न व्यक्तिले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मनका भावना आदानप्रदान गर्छन्।
‘भ्यालेन टाइन डे’ को सुरुवात प्राचिन रोमनबाट भएको हो। भ्यालेन्टाइन डेको औपचारिक सुरुवात इस्वी सम्वत २६९ रोमबाट सुरु भएको मानिन्छ।
तत्कालिन रोमन सम्राट क्लोडियस द्धितियले आफ्ना सैनिकलाई प्रेम तथा विवाह गर्न रोक लगाएका थिए। प्रेम तथा विवाहले सैनिक कमजोर हुन्छन् तथा युद्धसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना बाहिर सार्वजनिक हुन्न भन्ने धारणाले सम्राट क्यालोडियसले प्रेम तथा विवाहमा रोक लगाएको किम्बदन्ति छ।
सम्राटको नियम मन नपराउने रोमनका पादरीले सन्त भ्यालेन्टाइनले प्रेमको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। उनले प्रतिवन्ध उलंघन गर्दै सैनिकको सार्वजनिक रूपमा विवाह गराएका थिए। सम्राटले उनलाई पक्राउ गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाएका थिए। सोही दिनको सम्झनामा प्रेम दिवस मनाउन थालिएको हो।
प्रेम मनबाट पैदा हुने कुरा हो। हाम्रो दिमागमा प्रेम खेल्छ। त्यसलाई मनले महशुस गर्छ। त्यसैले त मुटुलाई प्रेमसँग तुलना गरिन्छ।
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलका अनुसार मुटु र प्रेमबीच गहिरो सम्बन्ध छ। ‘लभ इमोसनसँग जोडिएको कुरा हो। केमिकल रियाक्सन हुँदा हामीले केही महशुस गर्छौं। त्यसको इन्फरमेसन ब्रेनमा जान्छ। हार्मोनट एक्टिभिटीमार्फत शरीरका विभिन्न अंगमा जान्छ। र, मुटुमा त्यसको असर देखिन्छ’, उनी भन्छन्।
उनी प्रेमको आयु दुई/तीन वर्ष हुने बताउँछन्। ‘जति राम्रो प्रेम सम्बन्ध हेर्दा पनि त्यसको आयु दुई/तीन वर्ष हुन्छ। केमिकल हार्मोनल सर्जका कारण दुई/तीन वर्षसम्म पिक जान्छ। र, विस्तारै घट्छ। त्यो बेला सम्बन्ध बिग्रिने जोखिम हुन्छ’, उनी भन्छन्।
प्रेममा सहमती र सम्झौता भए फेरी त्यो सम्बन्धले गति पाउने उनको भनाई छ। प्रेममा मुटु, दिमाग र प्रेमको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुनेगरेको उनले बताए।
इमोसन मुटुसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसकै कारणले धडकन बढ्छ। उनले प्रेमले मुटु दुख्ने कुरामा सत्यता भएको बताएका छन्। ‘इमोसनले कोही व्यक्ति एक्युट इमोस्नल स्ट्रेस भयो भने उसको मुटु एकदमै कमजोर भएर व्यक्तिको मृत्यु नै हुनसक्छ। कुनै व्यक्तिले नराम्रो समाचार सुन्यो भने कार्डियो क-यास भएको हामीले सुनेका छौं’, उनी भन्छन्। यसको अर्थ इमोसनको सम्बन्ध मुटुसँग भएको उनको भनाई छ।
उनी प्रेमलाई व्यक्त गर्ने शैली मानिस पिच्छे फरक हुने धारणा राख्छन्। उनी मुटु र इमोसन तथा मुटु र लभको बलियो सम्बन्ध भएको बताउँछन्। त्यो ब्रेन भएर मुटुसम्म आउने उनको भनाई छ।
प्रेममा हुँदा आफूले पनि थुप्रै कुराको महशुस गरेको उनी बताउँछन्। ‘प्रेममा हुँदा कुनै गीतले मन छुदोरहेछ। गीतका सबै शब्द सहजै बुझ्न सकिदो रहेछ’, उनी भन्छन्, ‘प्रेम भनेको गर्लफ्रेन्ड मात्रै होइन। त्योभन्दा ठूलो उसको अभिभावकसँग हुन्छ। जुन सिधै ब्रेनसँग जोडिएको हुन्छ। अभिभावकले गरेको योगदान सबैभन्दा ठूलो लभ हो।’